Others Archives - Page5of 10 - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
Shop.com.mm ရဲ့ Shop Mart ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပေးတာလဲ?0222
Usman Ghani August 10, 2020 11:56 am August 10, 2020
Shop.com.mm ရဲ့ Shop Mart ဆိုတာကတော့ စားသောက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်နဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချပေးတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေတင်မကပဲ ခလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလဲ Shop Mart မှာဝယ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ Shop Mart ကပစ္စည်းတွေကို Brands …
အလှအပရေးရာနဲ့ ပတ်သပ်ပြီး လူမေးများတဲ့မေးခွန်းတွေကို သင်ကောဖြေနိုင်ပါ့မလား?0269
Usman Ghani August 10, 2020 11:46 am August 13, 2020
နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ Shop.com.mm မှ Global Collection0218
Usman Ghani August 7, 2020 11:18 am August 7, 2020
၁၀၀% ပစ္စည်းစစ်မှန်တဲ့ Shop.com.mm ရဲ့ Official Store0235
Usman Ghani August 6, 2020 10:41 am August 6, 2020
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အထူးလျှော့စျေးများစွာနဲ့ Tech Week0160
Usman Ghani July 6, 2020 9:46 am July 7, 2020
Tech Week with amazing discount0145
”Get in the Shop First Game and win prizes”0173
Usman Ghani June 26, 2020 11:58 am June 29, 2020
Shop is going to launch an exciting game plan withalot of rewards and voucher codes. Gamers will find …
”အိမ်မွေးခွေးလေးတွေအကြောင်းလေ့လာရင်း မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြည့်ရအောင်”0216
Usman Ghani June 16, 2020 11:17 am June 16, 2020
Shop မှာ အိမ်မွေးတိရစ္တာန်လေးတွေအတွက် အစားအစာလေးတွေနဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ ဝယ်ယူရန် – Link 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. Shop app …
”အိမ်မွေးတိရစ္တာန်လေးတွေအကြောင်းသိကောင်းစရာလေးတွေကို မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်”0178
Usman Ghani June 12, 2020 9:49 am June 12, 2020
”တီဗွီတစ်လုံးဝယ်ယူတဲ့အခါ အဓိကသိရှိထားရမည့်အချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ?”0567
Usman Ghani June 10, 2020 10:39 am June 14, 2020
များသောအားဖြင့် တီဗွီဝယ်မယ်ဆို အများစုက စျေးနှုန်းနဲ့ TV မျက်နှာပြင်အကျယ်ကိုပဲကြည့်ပြီးရွေးချယ်ဝယ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်တစ်ခါ တစ်လေမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရုပ်ထွက် တီဗွီမျိုးမရတတ်ကြပါဖူး။ တီဗွီတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးသိထားရမှာက တီဗွီရဲ့ Display Resolution ဘယ်လောက်ရှိတာကိုလိုချင်လဲဆိုတာပါပဲ။ Display Resolution ဆိုတာ …